फेसबुकबाट नजिकिएका ‘साथी’ले जि’उँ’दै म’ट्टिते’ल छ’र्के’र आ’गो ल’गाइदिए ! ( भिडीयो सहित) – Life Nepali
फेसबुकबाट नजिकिएका ‘साथी’ले जि’उँ’दै म’ट्टिते’ल छ’र्के’र आ’गो ल’गाइदिए ! ( भिडीयो सहित)
काठमाडौं। दैनिक ज्या’ला’दारी काम गरेर पाँच जनाको परिवार पाल्दै आएका चक्रबहादुर कार्की सधैंझै काम खोज्दै दौडिरहेका थिए। मोबाइलमा नयाँ नम्बरबाट फोन आयो। उनले उठाए। उठाउने बित्तिकै आवाज आयो, ‘तपाइँको छोरीको शरीरमा आगो लागेको छ। एकदमै सिxरियस अवस्थामा छ। तपाई तुरुन्तै अ’स्पताल आउनु पर्यो। ** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला **
’फोन राम्रोसँग सुनिएन उनले विस्तारमा बुझेनन् । यत्ति बुझे उनकी छोरी सं’कटमा छिन् र यत्ति बुझ्नु उनलाई साँखुको सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालतर्फ दौडिनको लागि पर्याप्त थियो । अस्पतालमा उनकी छोरी चि’न्न नसकिने अवस्थामा थिइन् । जले’र अनुहार क्ष’त वि’क्षत भएको थियो । छोरीको विभत्स अवस्था देखेर निराश भए। होस हवास उड्यो। डाक्टरले भने ‘ढिलो किन गर्नुभयो ? तुरुन्त आइसियूमा राख्नु पर्छ। भेन्टिलेटर लिनुपर्छ ।** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला **
’महिला हिं’साका घ’टना समाचारमा थाहा पाउने गरेका कार्कीलाई आफ्नै छोरीमाथि ब’ज्रपा’त पर्दा नि’राशाले छोपेको छ । ‘छोरीलाई यस्तो वि’भत्स अ’वस्थामा पुर्याउने अप’राधीलाई हदैसम्मको का’रवाही हुनुपर्छ। मेरी छोरीलाई भाग्य’ले बचायो। उनका साथीहरु तु’रुन्तै आएर अस्पताल नपुर्याएको भए जेसुकै हुन सक्थ्यो’ किर्तिपुर अस्पतालमा छोरीको उप’चार गराइरहेका कार्की भन्छन् ।** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला **
Previous को,रोनाको सं,क्रमण बढेपछि फेरि लकडाउनको घोषणा
Next WHO ले कोरोनाको स्रोत पत्ता लगायो, यसरी सरेको रहेछ मान्छेमा कोरोना